#Madagascar : Fasan’ny karana, nitokona ny zotra nasionaly | ONG Lalana Blog
#Madagascar : Fasan’ny karana, nitokona ny zotra nasionaly
Naneho ny tsy fahafaliany. Nitokona tsy niasa, omaly, ny mpitatitra amin’ny zotra nasionaly sy rezionaly teny amin’ny tobim-piantsonan’ny taksiborosy, eny amin’ny Fasan’ny Karana. Tsy ankasitrahan’izy ireo ny naoty navoakan’ny minisiteran’ny Fitaterana mahakasika ny fanovàna ny lalan-jotra ho tokana.
« Tokony hampanao fivoriambe ny tompon’andraikitra ka izay fanapahan-kevitra lanin’ny be sy ny maro no hampiarina fa tsy atao teny midina tampoka amin’ny alalan’ny naoty toy izao. Mamono anay io naoty io ka tsy ankasitrahanay satria efa mihena 70% ny taham-pamenoana ho an’ny taksiborosy, tsy lazaina intsony koa etsy andaniny ny tsy fandriampahalemana. Ankoatr’izay, ny kalitaon’ny solika efa miharatsy ka manimba fiara ary miteraka faty antoka », raha ny fanazavan- dRakotondrafara Fredinard ao amin’ny komity mpiara-mitantana eny amin’ny tobim-piantsonan’ny taksiborosy eny Anosizato.
Niditra an-tsehatra nandray fepetra nanoloana ny fibahanan-dàlana nataon’ireo mpitokona ny mpitandro ny filaminana avy amin’ny Emmoreg, tamin’ny 11 ora atoandro, satria niteraka olana teo amin’ny fifamoivoizana izany. Mpamily efatra raha ny voalazan’ireo mpitatitra nitokona no voasambotra nandritra izany.
Roa kosa anefa no nolazain’ny tompon’andraikitry ny mpitandro ny filaminana fa nentin’izy ireo.
« Nentina nalaina am-bavany ireo mpitatitra nitokona roa ireo fa tsy nosamborina hogadraina akory », raha ny voalazan’ny kaomisera Rabearivony Joël, tompon’andraikitra ao amin’ny CCU.
« Mbola tsy fantatra mazava izay tena antony nampitokona ireo mpitatitra ireo, ka tsy afaka miteny na inona na inona aloha izahay. Mbola hisy rahateo ny fiarahanay midinika amin’izy ireo mba ahafantarana ny marina », hoy ny tale jeneralin’ny ATT, Razakarivony Mamy Gérard.
« Hifampidinika amin’ny minisiteran’ny Fitaterana mba hijerena vahaolana izahay rahampitso (anio), Ka hiverina hiasa izahay manomboka rahampitso (anio) », hoy kosa Rakotondrafara Fredinard.
Ny tolakandro tokony ho tamin’ny 3 ora ihany ireo mpamily voasambotra dia navoaka. Ny tompon’andraikitry ny minisiteran’ny Fitaterana niaraka tamin’ny solontenan’ny mpitatitra avy ao amin’ny zotra rezionaly sy nasionaly no namoaka azy ireo tamin’izany.